Posted by စံပယ်ချို | Wednesday, February 6, 2019
Posted by စံပယ်ချို |
ရှိစု မဲ့စု စကားလုံးတွေ အားလုံး
ရေးချ ပြီး ကဗျာလုပ်တော့
အလင်းရောင်တွေ ပျောက် ပျောက်လာတယ်
မခေါ်ပဲ ရောက် ရောက်လာတတ်သူတွေထဲ
တိုင်းဆပြီး အမြဲ နှိုင်းယဉ်နေမယ်ဆိုရင်တော့
ခါး ခါးလာတာ အပြစ်မရှိဘူးကွယ်
မင်းရော ငါ ပါ
Thu, Oct 18, 2012, ကရေးသားခဲ့သောကဗျာ
Posted by စံပယ်ချို | Wednesday, December 12, 2018
ရွှေးချယ်ပိုင်ခွင့် မရှိတဲ့ နေရာ
အမှန်တရားလုံးဝ မဟုတ်တဲ့ ကိစ္စတွေအတွက်
သ်ိနေ တော်နေ လွန်းရင်လဲ လူတွေ
အပူဆိုတာ သူတို့တွေရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်
ကျွန်တော် ၄၀ နားကပ်နေပါပြီတဲ့လေ
သိရင်လဲ ဖြေပေးပါသူငယ်ချင်းရေ ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်နီးပါးက ကဗျာ
Posted by စံပယ်ချို | Saturday, August 18, 2018
သံသရာဟိုဖက် ဘယ်သူမြင်မလဲ အဖန်တရာတိုင်လွမ်းနေတာ။
တီတင့်နဲ့မိုးညတို့ပြောတာနဲ့ Draft လေးကိုနဲနဲပြင်ပြီးတင်လိုက်ရတာမို့ အမှားပါခဲ့လျှင်ခွင့်လွတ်ပါရှင်။
Posted by စံပယ်ချို | Sunday, July 29, 2018
တပိုင်းတစ ဆိုိတဲ့အသုံးနှုန်းကို သုံးရမလား
ငါ့ နှလုံးသား သွေးတွေထွက်နေကိုလဲ
ကျေနပ် နေရတာပါကွယ် ၊
အလွမ်းတွေ ခြွေချ ပြနေတာမဟုတ်ပါပဲ
ကာရံ မလှတဲ့ ကဗျာတချို့ နှလုံးသးထဲက
ပိုးကုန်ပြီး ကျွန်မဘာမှ မတတ်ခဲ့ပါ ၊
ကျွန်မရဲ့ အနာဂါတ်တွေ ပျက်ခဲ့ရပြီ ၊
ရှုံးနိမ့်လို့ ရလိုက်တဲ့ ဒဏ်ရာ
သန့်စင်တဲ့ ဒဏ်ရာဖြူပဲ ဖြစ်ပါရစေကွယ် ၊
သံယောဇဉ်အကျဉ်းထောင်ကြီးရဲ့ ၀င်ပေါက်တခုပါလားကွယ် ။
ရေးသားချိန် September 2014.
Posted by စံပယ်ချို | Saturday, December 2, 2017
တရွက်နု ပြီးတော့ အကုန်လုံးလိုက်နုတဲ့ နွေကို
တရွက်ကြွေ ပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်လို့ကြွေတဲ့ ဒီဆောင်း...အသစ်ဖြစ်နေပြီ
တပင်လုံးဝေခဲ့တုန်းက ငါ့အလွမ်းတွေ ခပ်စွေစွေဖက်ကို ယိုင်ခဲ့ရသလို
အရိုးပြိုင်းပြိုင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့အပင်တွေကြောင့် ငါ့ လဲစိတ်ရိုင်းဝင်နေမိတာလား
နှလုံးသားမှာတော့ ဒွိဟ ။
ချစ်ခြင်းတွေ နုပျိုနေဆဲ ။
ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာလုံးဝ မရှိခဲ့ဘူးနော် ။
သွားရင်းလာရင်း ဘ၀င်မကျစရာနဲ့ တိုက်မိပြန်တယ်
လူ့ဘ၀ထဲ ရောက်လာခဲ့ပုံ တယောက်နဲ့တယောက်ကွာခြားလွန်းတာမို့
ကိုယ်ဘ၀ကို ကိုယ့်ကျေနပ်စွာ ရေးလိုက်တာပါ ။ ။
ရေးသားပြီးချိန် December 1,2017
Posted by စံပယ်ချို | Tuesday, August 1, 2017
နင်းခြေလို့ ရခဲ့ရင် ?
ခပ်စောစော နေ၀င် မိုးချုပ်တဲ့ ကာလမှာ
လရောင်ကိုလွမ်းတတ်တဲ့ စိတ်လေးနှလုံးထဲ ကိန်းအောင်းလာခဲ့ပြီ
အချစ်က သူ့ အတွက်နူပျိုစေပြီ
ခုတော့ သူက တဖြေးဖြေးနဲ့ မသိမသာလေးထွက်ခွါသွားလိုက်တာပါ ။
၂၀၁၃ တင်ဖူးတဲ့အဟောင်းကိုတချို့စာသားတွေပြောင်းပြီး ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။့ 
Posted by စံပယ်ချို | Wednesday, June 7, 2017
ကျွန်မ ဘယ်တော့များမှ ကြယ်စင်ဖြစ်ခွင့်ရှိမလဲ
အိုမင်းလို့လာနေပြီ လက်ဗလာနဲ့လာကြတဲ့သူ လက်ဗလာနဲ့ပြန်ကြတဲ့သူ .
တကယ်လို့ချစ်တဲ့စိတ်တွေမှာအရိပ်ဆိုတာရှိခဲ့ရင် ကျွန်မဘ၀တလျှေက်လုံး အရိပ်တွေချည်းပါပဲကွယ်။ ဒေလီယာကိုလဲချစ်ခဲ့ဖူးတယ် စကားပန်းလေးတွေကိုလဲ ချစ်ခဲ့ဖူးတယ် စံပယ်လေးတွေကိုလဲမြတ်နိုးခဲ့တာပါပဲ ခုတော့ ရင်ဘတ်တခုလုံး မှာ
ကျွန်မရဲ့ စကားလုံးတွေက တိမ်တွေသယ်ဆောင်ရာပါသွားသလို
ကျွန်မအလွမ်းတွေကိုလဲ လေတိုက်ရာလွှင့်လိုက်ချင်သူပါ ။
တချို့က ဖြူစင်သလို ရိုးစင်းသလို နေပေမဲ့ အတွင်းစိတ်မကြာခဏပြတတ်ကြတယ်
ကျွန်မရဲ့ ကဗျာတွေ တခါတရံ ရိုးရှင်းတယ် တခါတရံ ကောက်တွေ့တယ်
တခါတရံ မျက်ရည်တို့ပါဝင်ခဲ့ရတယ် ။
ဘ၀ရပ်တည်ဖို့အတွက် လူတချို့ သိက္ခာတွေ ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်
လူတချို့ကတော့ အစကတဲက ရင်းစရာသိက္ခာတောင်မရှိခဲ့ကြဘူး
ကျွန်မလဲ ရောက်တတ်ရာရာကဗျာရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
Posted by စံပယ်ချို | Monday, April 3, 2017
ရွာနေတဲ့ မိုးစက် လက်နဲ့ခံ ကြည့်လိုက်တယ်
လက်ကတော့ အေးစက်ပြီး နှလုံးသာ ပူလောင်နေဆဲ
အောက်သက်သက်နဲ့ လွမ်းလို့ ကောင်းတုန်း
ခံစားချက် ဗလာ ။
ဒဏ်ရာတခုကို အစိမ်းချုပ်လိုက်သလိုမျိုးပေါ့ ။
တမ်းတမှုတွေကို ခပ်မာမာ မောင်းထုပ်လိုက်ချင်လဲ
အတု အပ ကိုလဲ ရင်ဘတ်ကလက်မခံ
လက်ကျန် အလွမ်းကို အဖော်ပြုပြီး
ကျွမ်းနေတဲ့ ဒီ အသဲ
နေ နေရပြီကွယ် ။
ကျွမ်းပြီးရင်းကျွမ်းပေါ့ ။ ။
Posted by စံပယ်ချို | Friday, March 24, 2017
အဲတာတွေဟာ လက်တွေ့ဘ၀မှာ အမှားတခုဖြစ်ခဲ့ရပြီ။
ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ပဲ လှဖို့လိုတယ်ဆိုတာ
စည်းကမ်းတွေတင်းကျပ်မှုဘောင်ထဲ (သို့မဟုတ်) သေးသေးလေးကအစ
အေးစက်စက်အကြည့် ခံစားရတာ များလာတော့
ဖိအားတွေ အားသာလွန်းလို့ အရပ်ဒေသတခုမှာ
သဲဖြူခင်း ရာဇမတ်လဲ မကာထားတဲ့ခရီး
ကျွန်မကတော့ နှလုံးသာ တခြမ်းပဲ့
၆လလောက်ကြာအောင်ရေးခဲ့ရတဲ့ ကဗျာ လို့ပဲပြောရမယ်ထင်တာပဲ။
Posted by စံပယ်ချို | Tuesday, March 7, 2017
မိုးဖွဲလေးရွာနေတာတညလုံး မိုးလင်းထိ၊ တချက် တချက်လေပြင်းရိုက်ချက်ကလူတကိုယ်လုံးလွှင့်ထွက်မတတ်ခံစားရတယ် ပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်မြင်သမျှ မှုန်ပြပြဖြစ်သလို ကျွန်မရင်ဘတ်ထဲက သတိရခြင်းလွမ်းခြင်းတွေကလဲ ခုထိမှုန်ပြပြဖြစ်နေသေးတာပဲ..ငယ်သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့အသိနဲ့ တူတူသွားခဲ့ တူတူစားခဲ့ အမှတ်တရလေးတွေတိုက်ဆိုင်မှုရှိတိုင်း သတိတရရှိနေတုန်းပေါ့ ။
ငယ်ငယ်ကနေခဲ့တဲ့ကျွန်မတို့အိမ်ရှေ့က စိန်ပန်းပြာပင်ကြီးပွင့်ချိန်ဆိုရင် အပြာရောင်လွင်ပြင်ကျယ်ကြီးအဖြစ်မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်း ဒီနေ့ထိမျက်စိထဲမြင်တုန်း အတွေးထဲမှာရှိနေတုန်း.
ကောက်ညင်းပေါင်းနဲ့အကြော်ဘယ်နားကဆိုင်ကောင်းတယ် တိုဖူးနွေးဘယ်ဆိုင်ကပိုကောင်းတယ် ငြင်းကြခုန်ကြနဲ့၊ တခါကတော့ တောင်ကြီးဟိုတည်မှာ ရှမ်းခေါက်ဆွဲစားဖြစ်ခဲ့တာမှတ်မှတ်ရရ...(စားလို့မကောင်းတဲ့အဖြစ်ကို) သတိတရရှိနေခဲ့ပြီးတို့၂ယောက်ရယ်မောခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွ ဝေေ၀၀ါးဝါးရှိနေခဲ့သေးတာကို
ထင်ထင်ရှားရှားမှတ်မိနေခဲ့အောင်ကိုမှတ်ဥာဏ်တွေကောင်းနေဆဲ၊ ကမ္ဘာကြီးရဲ့အနောက်ခြမ်းမှာသူနေပြီး အရှေ့ခြမ်းမှာကျွန်မနေပါတယ်။ သူ့ဖက်ကနေ၀င်ကိုယ့်ဖက်ကနေထွက် သူ့အရပ်မှာနွေရာသီ သစ်ပင်တွေအရိုးပြိုင်းပြိုင်းနဲ့နွေသရုပ်ပြနေခဲ့တာ၊ ကိုယ့်ဖက်မှာတော့ အဲဒီအချိန်ပတ်ဝန်းကျင်မြင်မြင်သမျှ
အကုန်လှတဲ့မြင်ကွင်း သူကလဲဒီကောင်းကင်အောက် ကိုယ်ကလဲဒီကောင်းကင်အောက် တို့၂ယောက်တပြိုင်တည်းဒီကောင်းကင်ကြီးကိုမော့ကြည့်မိမလားလို့တခါတလေတွေးမိသေးတယ်၊
မကြာခင် လှပလွန်းတဲ့ နွေဦးရာသီကိုရောက်ပါတော့မယ် .. သူရှိနေတဲ့နေရာမှာတော့ ပူလို့ တောင်တန်းကြီးငိုနေပြီတဲ့လေ... တွေ့ဖို့ခက်ခက် မြင်ဖို့ခက်ခက် လွမ်းတသက်သက်နဲ့
တမ်းတရင်းတမ်းတနေမိတာကိုက ကျွန်မရဲ့ အားနဲချက်များဖြစ်နေမလား ဘယ်တော့ပြန်ဆုံမလဲ
ဒီနှစ်လား နောက်နှစ်လား ဘယ်တော့လဲ ? မေးခွန်းတွေနဲ့ ချာချာလည်နေရပါပြီ ၊ အလွမ်းတွေကြီးလွန်းတော့ နှလုံးသားကမခံနိုင် ပေမဲ့ ဒီမြို့လေးက ကျွန်မကိုထုံဆေးထိုးပေးထားတယ်
ကျွန်မရဲ့ ထုံဆေးများနဲ့မြို့ လို့လဲတင်စားထားပြီးသားမို့ ခံနိုင်ရည်ရှိနေမှာပါချစ်သောသူငယ်ချင်းရေ။
Posted by စံပယ်ချို | Saturday, December 10, 2016
တကယ်တော့ ကျွန်မဘ၀က အလွမ်းအဆွေးမရှိခဲ့ပါဘူး။
တကယ်တော့ ကျွန်မဘ၀က အချစ်မရှိခဲ့ပါဘူး။
တကယ်တော့ ကျွန်မခပ်နံ့နံ့ထဲက မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
တကယ်တော့ အဲဒီလိုညတွေကိုထိုင်ကြည့်နေဖို့ ကျွန်မမှာအားလပ်ချိန်မရှိခဲ့ပါ။
အသဲထဲက ကျိုးတိုးကျဲတဲ သံယောဇဉ်တွေအကြောင်း
သဲထဲရေသွန် ကျွဲပါးစောင်းတီး ပိုးသာကုန်မောင်ပုံစောင်းမတတ် အဲတာတွေကိုသုံးပြီး
အမြင်မတူ အတွေးအခေါ်ကွဲပြားခဲ့ပေမဲ့လဲ ကျွန်မတို့ချစ်ခြင်းတွေက
Posted by စံပယ်ချို | Friday, October 14, 2016
၁ ရာသီ ၃ လဆိုတာလဲ ခဏလေးပါပဲ
ဒီရာသီတွေနဲ့ ကျွန်မ တဖြေးဖြေးပျော်ဝင်လာပြီ
ကျွန်မ မနှစ်မြို့ဆုံးကတော့ ဆောင်းရာသီ ။
ငယ်စဉ်အခါက ဒီဇင်ဘာရောက်ပြီ ဆောင်းရောက်ပြီဆိုရင်
အလင်းတွေပျောက်ဆုံးပြီး နေရောင်ဟာ သူထင်သလိုလင်းခွင့်မရတော့ဘူး
သူ့ကိုမုန်းတယ်ပြောတိုင်း သူ့ရဲ့ အအေးဒဏ်နဲ့ ကျွန်မကိုဖိမှာလေ
ကိုယ် မချစ်တဲ့ အရာတွေကိုလဲကိုယ်က ဂရုစိုက်နေရပါလားဆိုတာကို။
Labels: ခံစားချက်, အက်ဆေး